Global Voices teny Malagasy » Kianjan’ny Baolina, Toerana Fakambolontany ho An’ireo Karazana Mpifindra-monina · Global Voices teny Malagasy » Print
Kianjan'ny Baolina, Toerana Fakambolontany ho An'ireo Karazana Mpifindra-monina
Voadika ny 22 Novambra 2016 6:16 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Madagasikara, Fanatanjahantena, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Tanora, Ny Tetezana - The Bridge
Ankizy milalao baolina eto Madagasikara. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Tsy maintsy milaza zavatra aminareo aho: tsy mahay mihitsy aho rehefa milalao baolina kitra. Ny fihetsiko mahazatra dia mikoropaka mandona baolina amin'ny loha (coup de tête) rehefa mianjera amin'ny tany, fihetsika izay mety hangalarin'i Phil Jones avy ao Manchester United amiko atsy ho atsy. Afaka manamarina ireo namako any an-tsekoly, ny rahalahiko sy anabavy ary ny vadiko fa manana tongotra havia anankiroa aho.
Kanefa, mitsambikina foana aho amin'ny fotoana rehetra mba hampahadala ny tenako eo amin'ny kianjan'ny baolina kitra, miaraka amin'izay tia miantra kokoa mba hiara-hilalao amiko. Matetika aho voatendry ho mpiandry tsato-kazo, fa eo no tian'ny ekipa ametrahana ireo mpilalao manana fahaiza-manao voafetra.
Koa nahoana no mametraka ny tenako tamin'ny fanalam-baraka salakain’ ny namana sy ny olona tsy fantatra aho? Nahoana aho no mikiry hihazakazaka manodidina tahaka ny akoho tsy misy loha manenjika baolina tsy mety azo ary mila hisanehaka mandritra izany?
Tamin'ny fahazazako izany. Niasa tamin'ny sampan-draharaha ara-pahasalamana iraisam-pirenena ny ray aman-dreniko, ary tsy maintsy mifindra trano isaky ny efa-taona, eo ho eo izahay noho ny asan'izy ireo. Lasa fahazarana ho ahy sy ny anabaviko ny mizatra fiteny sy kolontsaina vaovao.
Maro ireo olona manana toro-hevitra sy fikafika manokana amin'ny fanazarana ny tenan'izy ireo amin'ny tontolo vaovao sy ny mpiara-belona vaovao. Ny ahy kosa fanaovana fanatanjahantena eny an-dalana. Tamin'ny traikefako, tsy misy fomba haingana hahatakarana ny manodidina anao ara-tsosialy afa-tsy ny miresadresaka kely mandritra ny lalao baolina. (Tia milalao basket aho noho ny halavako, saingy rehefa mitety izao tontolo izao ianao dia toa tsy dia misy loatra ny lalao basket noho ny baolina kitra any amin'izay andehananao). Natao tamin'ny tokontany miala kely ny trano fonenako ny iray amin'ireo lalao iraisana nataoko matetika tamin'izany andro izay. Toeram-pivoriana matetika ho an'ireo mpitsoa-ponenana miaraka milalao baolina ao Paris ity sehatra eo amin'ny sary eto ambany.ity.
Kianja baolina kitra vonjimaika ho an'ireo mpitsoa-ponenana ao Paris. Sary avy amin'ny mpanora tra.
Mahatonga ho mpinamana ny lalao amin'ny ankapobeny, saingy mbola ifaninanana ihany. Avy amin'ny firenena samihafa ireo mpandray anjara, ka atao faran'izay kely ny resadresaka mandritra ny lalao. Herinandro vitsy lasa izay, niaraka taminay nandritra ny lalao iray ireo Maliana vitsivitsy. Niresaka kely izahay rehefa avy nandresy anay izy ireo. Mahavaky fo ny tantara nozarain'izy ireo momba ny dian'izy ireo avy any Mali hihazo an'i Eoropa manavatsava ny ranomasina Mediteraneana. Mpilalao baolina ikoizana i Alassane, zokiny indrindra ao amin'ny ekipa Maliana, saingy nandringa izy ary mora reraka vetivety. Nanazava izy fa nankany Frantsa mba hiezaka hamelona ny zafi-keliny efatra. Tsy tiany ny hialàn'ireo zanany lahy amin'ny fiankohonan'izy ireo hitady asa any ampitan-dranomasina, ka nanao dia lavabe manerana ny tany hay izy hihazo an'i Eoropa hitady zava-baovao sy handefa vola any an-tanindrazana. Nilaza izy fa narary ireo mpandeha sasantsasany tao anatin'ny kamiao nandehanany nandritra ny dia ary tsy tonga tany Maraoka, toerana tokony hiampitàn'izy ireo an'i Espaina. Tsy nanome antsipirahany momba ny diany i Alassane saingy afaka milaza amin'ny alalan'ny fijery varimbariana tonga tampoka eo amin'ny tavany isika fa nisy zavatra tiany hohadinoina.
Mitondra fifankahazoana  [mg] ny fanatanjahantena [mg] ary hevitra malaza ny fijery avy eo amin'ny toeran'ny hafa. Ohatra iray malaza amin'izany ny ekipa mpitsoa-ponenana tamin'ny Lalao Olaimpika 2016 .
RIO 2016 REFUGEE OLYMPIC TEAM https://t.co/CLN2RqAdfa  #Olympics  #RefugeeOlympicTeam  #OlympicAthletes  #Rio2016  pic.twitter.com/S04MFccVtY 
EKIPAN'NY MPITSOA-PONENANA AMIN'NY LALAO OLAIMPIKA RIO 2016
Vao haingana indrindra ny ekipa tanoran'ny UNRWA (Sampan-draharahan'ny Asa sy ny Fanampiana ao amin'ny Firenena Mikambana) misahana ny mpitsoa-ponenana Palestiniana avy ao Gaza no nandresy tamin'ny lalao baolina kitra ho an'ny tanora manerantany , Amboara Norvezy tao Oslo, izay ekipa 2.199 avy amin'ny firenena 70 mahery no nandray anjara.
Ho ahy, fifandraisana indray amin'ny ampahan'ny fiainako izay nilazaoko aloha loatra ny filalaovana baolina. Lehibe tao Madagasikara aho, ary nandao ny firenena rehefa feno 13 taona. Tsapako toa manina ireo fotoam-pibeazana miaraka amin'ireo namana sy havana izay zava-dehibe ho ahy nandritra ny fahazazako aho. Ankehitriny, rehefa miverina ao Madagasikara aho, tahaka ny sady any an-trano aho no amin'ny toerana hafa ihany koa. Heveriko fa marina tanteraka ny hoe tsy afaka mody any an-trano indray ianao.
Nandritra ny fotoana nijanonako tao Madagasikara, herinandro vitsivitsy izay, sendra nahita lalao baolina kitra mahery vaika nolalaovin'ny ankizy teny amoron-dranomasin'i Ramena, tanàna fanjonoana ao amin'ny morontsiraka avaratra izaho sy ny rahalahiko. Nanontany izahay raha afaka milalao, ary nanaiky tsy nihafahafa ireo ankizy. Somary nihatakataka kely tamin'ireo mpilalao izaho sy ny rahalahiko: zokiny indrindra sady mavesa-danja izahay, ary haingana kokoa sy nanana faharetana kokoa ireo ankizy. Natahotra izahay rehefa mandaka baolina mba tsy ho voadòna, raha nilalao malalaka kosa ireo ankizy ary tsy mba dia niresaka kely tamin'ireo “mpizaha-tany avy ao an-toerana”. Monina amin'ny tontolo samihafa ny rahalahiko sy ny tenako ary ireo ankizy ireo, saingy nandritra ny 20 minitra, mitovy tanindrazana izahay, ao amin'ny toerana, tsy hijerena taona, foko na sata ara-tsosialy izay tanindrazanay.
Amin'ny maha mpifindra-monina, na dia samihafa amin'ny endriny maro aza ireo tolontsika, misy ny fanamby roa atrehintsika rehetra: ny fakana volontany amin'ny manodidina vaovao, sy ny tsy fanadinoina ny toerana niaviantsika. Amiko, ny lalao kisendrasendra amin'ny baolina kitra dia nanampy nanamaivana ny olan'ireo toe-javatra ireo izay tsy ho vitan'ny fandaharam-potoana hafa na politikam-panjakana mihitsy.
Milalao baolina miaraka amin'ny zanaky ny mpanjono ao Ramena, Madagasikara (sary avy amin'ny mpanoratra)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/22/91694/
 mety hangalarin'i Phil Jones avy ao Manchester United amiko : http://thebiglead.com/2015/05/17/phil-jones-scrambling-header-took-some-chutzpah/
 Mitondra fifankahazoana : https://mg.globalvoices.org/2016/08/23/87060/
 ekipa mpitsoa-ponenana tamin'ny Lalao Olaimpika 2016: https://www.google.com/url?q=https://globalvoices.org/2016/06/22/10-athletes-from-four-countries-will-compete-at-the-olympics-under-one-banner-refugee/&sa=U&ved=0ahUKEwiqwMOYvYTQAhUGKsAKHZFfCP8QFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEYJaMa9L8Ju9nVcudOA9cmckAQFQ
 August 18, 2016: https://twitter.com/supermorgy/status/766195560189612032
 mpitsoa-ponenana Palestiniana avy ao Gaza no nandresy tamin'ny lalao baolina kitra ho an'ny tanora manerantany: http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-football-team-gaza-wins-again-norway